Miteraha palety miloko maimaim-poana amin'ny Coolors
Coolors dia fitaovana an-tranonkala afaka mamorona palette miloko mandeha ho azy sy tsy misy fandaniana euro.
Fironana famolavolana tranonkala ho an'ny 2017
Ny fironana amin'ny famolavolana tranonkala izay hitranga amin'ny taona 2017 izay hahatonga anao hanova ny fomba fanatanterahanao ny asa ho avy sy ny fangatahan'ny mpanjifa
Fampiononana hampivelatra ny famoronana
Fampaherezana hampivelatra ny fahaiza-mamorona ny artista ao anatinao. Fanaka, kojakoja, kojakoja ary maro hafa koa mba tsy hanadinoanao na inona na inona amin'ny asanao.
Ireo mpanakanto toa an'i Jessica Walsh no mameno ny eritreritry ny mpanaraka sy ny zavakanto saro-kenatra izay nanomboka tamin'ny tontolon'ny famoahana.
StockUn Unlimited dia manome anao fampidinana sary tsy voafetra, sary ary maro hafa toa an'i Netflix
Stockun Unlimited dia mampiasa endrika mitovy amin'ny Netflix, Spotify sy ny maro hafa, hanolorana fampidinana sary, sary ary maro hafa tsy voafetra
Prisma dia havaozina ary mandefa miaraka amin'ny endrika efajoro hanomezana fahalalahana bebe kokoa rehefa mamorona
Manomboka androany dia navotsotra ny Prisma avy amin'ny endrika efamira amin'ireo sary azontsika atao tamin'ity fampiharana tsara ity hampiharina sivana.
Hayao Miyazaki, mpiara-manorina ny Studio Ghibli, dia nilaza mazava izay eritreretiny momba ny sary mihetsika miaraka amin'i AI
Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia manolo ny olombelona amin'ny sehatra maro. Hayao Miyazaki dia manazava mazava ny zava-mitranga rehefa manandrana mamorona ny AI izy.
Ny fahalalana ny Foundation James Dyson dia zava-dehibe
Ny fahalalana ny Fondation James Dyson dia zava-dehibe amintsika rehetra, raha manana hevitra ianao dia tanteraho ary ny fototra hanome anao vola hanatanterahana azy.
Hita tao amin'ny Beta ho an'ny daholobe izao ny programa Felix Proxy mahafinaritra an'i Adobe
Ny Project Felix, ilay programa mahavita manao sary tsy azo ivalozana dia azo alaina ho beta ho an'ny daholobe
Datalegreya dia endri-tsoratra maimaim-poana miaraka amin'ny tsipika grafika
Raha mitady font maimaimpoana kanto ianao izay mampiseho sary sy soatoavina miaraka amina tsipika iray dia tsy maintsy apetraka i Datalegreya.
Makà zavatra tena misy amin'ity scanner 3D vaovao ity
Ity scanner 3D ity dia afaka manara-maso sy misambotra zavatra tena izy izay azonao ampitaina amin'ny endrika 3D amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Manaova fanavaozana 3.2 miaraka amin'ny firaketana horonantsary amin'ny fotoana tena izy sy maro hafa
Procreate dia fampiharana tsara ho an'ny iOS izay mamela ny mpampiasa hamoaka ny kanto rehetra amin'ny alàlan'ny andiana fitaovana tonga lafatra amin'ny fanaovana sary.
Ny piraofilina Instagram izay hamelona ny famoronana anao amin'ny fakana sary, ny sary tsy miankina na ny fanaovana sary ara-teknika ary ny sary an-tsary, araho izy ireo!
Avadiho izay karazana rakitra miaraka amin'ny Convertio, fitaovana tranonkala matanjaka
Ankoatra ny fananana safidy maimaim-poana dia fitaovana an-tranonkala manana drafitra momba ny vidiny ary manolotra OCR maimaim-poana tanteraka i Convertio.
Amin'ity lahatsoratra ity dia afaka mahita alfabeta antitra isika, na liana amin'ny taratasy na mitady aingam-panahy fotsiny, ity ny lahatsoranao
Vectr dia tonian-dahatsoratra sary maimaimpoana izay nohavaozina amin'ny kinova 1.4
Raha mitady safidy maimaim-poana amin'ny Sketch ianao dia efa mandany ny fotoanao raha mbola tsy misintona ny Vectr izay nohavaozina tamin'ny kinova 1.4.
Ny fitaovana Invision vaovao ho an'ny fifindrana mora amin'ny famolavolana mankany amin'ny fampandrosoana
Invision dia nandefa fitaovana vaovao amin'ny beta ampahibemaso antsoina hoe Inspect izay tonga hanamora ny asan'ny mpamorona.
Anio dia ampidininay aminao ity safidin-tserasera maimaimpoana ity ho an'ny fampiasana maro, izy rehetra dia manana kalitao sy fahaiza-manao tsara, izay mampiavaka azy ireo.
Androany izahay dia mitondra sanganasa sanganasa sy famaritana fohy momba ilay mpanakanto kolozotra, Mariano Peccinetti, mandalo amin'ny bilaogy ary hahita ny tontolony.
Sketch dia fitaovana tsara amin'ny famolavolana fampiharana sy pejy web izay nohavaozina tamin'ny kinova 4.1 miaraka amin'ny sary vaovao.
Brandon Land, mpanao sary, mpanakanto ary mpamorona, amin'ity lahatsoratra ity dia mampahafantatra anao an'ity mpamorona kanto ity izahay, anisan'ireo mpanjifany dia Airbnb na Dropbox.
Raha mitady programa fanitsiana sary avo lenta sy mendrika avo lenta ianao dia manana Affinity Photo amin'ny Windows anio.
Pantone Studio dia rindrambaiko natokana ho an'ny iOS izay manandrana maka loko mba hahafantarana azy ireo amin'ny fomba tsotra sy azo ampiharina.
Fanesoana sakafo maimaimpoana
Izahay dia mitondra anao an'ity safidy ity amin'ny mockups samihafa ho an'ny mpamorona sakafo, maimaimpoana, kalitao ary azo ovaina amin'ny photoshop.
Fetibe fohy 2016 any Madrid
Vao notanterahina tany Madrid ny festival Brief 2016, voafantina ireo mpamorona endrika sy mpanao sary malaza eran-tany hanome ny lahateny.
Mental Canvas dia fitaovana vaovao mamafa ny elanelana misy eo amin'ny sary 2D sy 3D hanamorana ny fizotry ny famoronana
Kirby Jenner dia azo nantsoina hoe Andriamanitry ny Photoshop noho ny fahalalana ny fomba fampidirana amina fomba toy izany amin'ireo sary nindraminy avy amin'ireo modely sy olo-malaza.
Adobe dia miasa amin'ilay nofaritany ho "Photoshop of Audio" izay ahafahanao manampy teny amin'ny rakitra lahateny amin'ny fomba majika.
Comp CC dia rindrambaiko Adobe vaovao hamoronana lamina misy endrika sy tsipika voafaritra
Comp CC dia fampiharana finday ho an'ny Android sy iOS izay ahafahanao mamorona lamina haingana sy mora amin'ny fanamorana ny fitaovanao finday.
Adobe mandefa Photoshop Fix amin'ny Android hanatsarana ny tarehy sy ny sary
Raha mitady hamerina ny tarehy amin'ny sary ianao, toy ny fanitarana ny maso, dia mety tsara amin'izany ny Adobe Photoshop Fix. Azo alaina izao.
Niara-niasa i Adobe ary nanolotra fitaovana famolavolana 3D fotorealistic vaovao
Adobe nandefa ny Project Felix, fitaovana famolavolana 3D photorealistic hanombohana amin'ny endrika beta ho an'ireo mpamorona Creative Cloud
Azo alaina amin'ny Android izao ny Adobe Photoshop Sketch
Adobe Photoshop Sketch dia fampiharana vaovao tonga amin'ny Android androany izay mamela anao hanao sary sy handoko freehand hahazoana ny fahaizanao mamorona rehetra.
Ireo kahie Harry Potter Moleskine dia hamela anao hiteny
Moleskine dia namoaka kahie 2 Harry Potter hanamarihana ny famoahana ireo Fantastic Beasts sy ny toerana hahitana azy ireo
Ity no fiara voalohany eran'izao tontolo izao izay studio famoronana finday ihany
Nissan sy Studio Hardie dia namorona ity van ity izay studio famolavolana finday ahafahanao mivory sy mamorona ny endriny manaraka
Google dia namoaka andiana fitaovana hamoronana endrika kanto Design Material
Material Design no fiteny noforonin'i Google izay nampidiriny tao amin'ireo rindranasa sy serivisiny ary natao ho toy ny axis visual ho an'ny finday sy tranonkala.
Inona no vaovao ao amin'ny Paint vaovao mamelombelona
Ny Paint dia havaozina mba hanampy amin'ny fanavaozana lehibe vaovao an'ny Windows 10 antsoina hoe Creators Update. Famolavolana endrika ity fampiharana taloha ity.
Kittens mahafatifaty voasambotra tamin'ny fotoana mahatsikaiky
Pounce dia boky navoakan'i Seth Casteel izay maneho tsara ny fahafinaretan'ny zanak'akanjo mahafinaritra amin'ny fahatanorany. Andian-tantara mahatsikaiky sy mahatsikaiky.
Ny Planet Earth 2 dia misy sary iray izay hanapoaka anao
Ny planeta Earth II dia hanomboka amin'ny volana Novambra mba hitondra ny tsara indrindra amin'ity andiany BBC ity, izay ahafahanao mankafy ny hakanton'ny natiora sy ny bibidia
Fampiharana fanovana sary avo lenta 4 vaovao
Raha mitady rindrambaiko vaovao ianao izay manolo ireo malaza indrindra, ireo fampiharana 4 ireo dia azo antoka fa handresy lahatra anao amin'ny fampiasana isan'andro.
Polarr dia tonian-dahatsoratra vaovao tsara ho an'ny iOS sy Android
Raha mitady vahaolana hafa ianao ho fampiharana fanovana sary ho an'ny malaza indrindra amin'ny Android sy iOS, Polarr dia vaovao iray izay mifanaraka amin'ny andrasana
Fitaovana web sy fampiharana 4 hamoronana collage amin'ny sary Facebook
Ireto fitaovana Internet ireto dia tonga lafatra amin'ny famoronana collage miaraka amin'ireo sary anananao ao amin'ny tambajotra sosialy Facebook amin'ny fomba tsotra sy mora.
Loko miloko mahavariana noforonina tamin'ny karazana zavatra isan-karazany
Hillman dia mpanakanto hita maso izay afaka mamadika ny zavatra mahazatra ho lasa kanto noforoniny sary ary lokony no misy ny zava-drehetra
Ny Game Rockstar dia manaitra ny olona rehetra amin'ity sangan'asan'ny fanavotana mena maty vaovao ity
Rockstar Games dia namoaka ity fanoharana ity izay ahafahanao mamantatra ny fiverenan'ny Red Dead Redemption, ilay lalao lehibe an'ny Wild West.
Fampiharana horonantsary 5 tsara ho an'ny finday
Raha manana fitaovana Android na iOS ianao, ny rindrambaiko iray amin'ireo dia mety ho mora ampiasaina hanitsiana horonantsary tsy misy ahiahy lehibe
Nandao antsika i Michiyo Yasuda, mpandoko loko Studio Ghibli
Michiyo Yasuda no mpandoko ny sarimihetsika Studio Ghibli tsy hita isa handao antsika omaly tamin'ny faha-77 taonany.
Tranonkala 5 ambony hamoronana portfolio
Ireo tranonkala 5 ireo no tsara indrindra hitanao mba hamoronana ny portfolio-tserasera. Anisan'izany i Behance, fanta-daza tamin'ny fitsidihany an-tapitrisany
Ahoana ny fomba fametrahana ny Paint vaovao amin'ny solosainao Windows 10
Raha te hanana ny Paint vaovao napetraka ao amin'ny PC anao, dia tsy maintsy manamarina ianao fa manana ny iray amin'ireo fanavaozana farany an'ny Windows 10
Microsoft dia manavao tanteraka ny loko ary mamela anao hanao 3D amin'ny fomba tsy mampino
Tsy ho ela i Microsoft dia hanambara ny fisian'ny fampiharana Paint nohavaozina izay anisan'ny mampiavaka azy ny sary 3D
Ity dia fampiharana manokana ho an'ny ankizy kely hanomboka hanao sary
Artie sy ny Magic Pencil dia fampiharana ho an'ny Android sy iOS izay hampirisika ny ankizy kely ao an-trano hanomboka hianatra sary
Raha mitady safidy mendrika ny Adobe Illustrator ianao, Affinity Designer dia programa izay 20% izao amin'ny vidiny ary havaozina amin'ny 1.5.
Wacom MobileStudio Pro no takelaka finday vaovao an'ny Wacom izay navoaka tamin'ny modely enina ho an'ny karazana filàna sy paosy isan-karazany.
Maya 2017 mametraka ny lantom-peony amin'ny 'sary mihetsika'
Maya 2017 no kinova vaovao izay mitondra andiana zava-baovao mifandraika amin'ny sary mihetsika sy ny mpanakanto natokana ho an'ity karazana fifehezana ity.
Fampiharana fanovana sary 6 vaovao amin'ny 2016 izay tsy azonao adino
Raha manana fitaovana Android na iPhone ianao, androany dia ho tsara vintana amin'ireo fampiharana sary 6 manokana ho an'ny mpamorona.
Vardehaugen dia manao drafitra feno ho an'ny trano ho avy
Raha tena te hahalala ny habaka sy ny refin'ny drafitra ho an'ny tranonao ianao dia afaka manao izany amin'ny fomba tena izy ny orinasa Vanderhaugen.
Generator sombin-javatra marobe sy mora ampiasaina amin'ny alfa, izay tsy mila fampidinana satria azo amboarina amin'ny Internet (fitaovana famolavolana volo HTML)
Tombo-pahatsiarovana ny tsingerintaona faha-100 tamin'ny tantaran'i Agatha Christie voalohany
Agatha Christie dia namoaka ny tantarany voalohany vao 100 taona lasa izay ary izany no antony namoahan'i Angletera an'ity andiana hajia fahatsiarovana ity.
Grid modular: «Ny hatsaran'ny filaminana na ny filaharan'ny hatsarana» amin'ny endrika sary
Fampidirana fohy sy famerenana ny famolavolana sary miaraka amin'ny grid modular, ny tantarany ary ohatra vitsivitsy.
Zavakanto eny an-dalambe miaraka amina seams ho fanaovana pirinty eo amin'ny rindrin'i Raquel Rodrigo
Miaraka amin'ny tolo-keviny tany am-boalohany sy tamin'ny alàlan'ny fanjairana dia afaka manova rindrina volondavenona sy malazo ho zavakanto kely izy.
Fitaovana fiaraha-miasa 4 izay tokony ho fantatrao
Ireto fitaovana fiaraha-miasa 4 ireto dia ahafahanao miara-miasa amin'ny vondron'olona mifantoka amin'ilay tetikasa iray ihany.
Famerenana ireo taranja rehetra manandanja indrindra amin'ny haino aman-jery nomerika sy teknolojia izay ahafahana manamboatra ho avy ho anao amin'ny asa be laza.
Euro 2020 dia hanana endrika vaovao ahitàna tanàna eropeana 13 miely manerana ny kaontinanta handray ny lalao samy hafa amin'ny fiadiana ny tompondaka.
Raha manana tranokala ianao, amin'ny fotoana sasany amin'ny fiainanao dia tsy maintsy manova ny fampiantranoanao ianao. Toa fanambarana iray ...
Alan Moore, mpamorona ny V ho an'i Vendetta sy Watchmen, misotro ronono amin'ny famoronana tantara an-tsary
Alan Moore dia iray amin'ireo mpamorona tantara an-tsary malaza indrindra izay manana Watchmen na V ho an'i Vendetta eo ambanin'ny fehikibony. Ankehitriny dia manambara izy fa hisotro ronono.
Karl Lagerfeld dia mamolavola ity boaty kanto ity amin'ny pensilihazo miloko isan-karazany
Karl Lagerfeld, mpamorona lamaody malaza, dia nanampy an'i Faber-Castell hamorona ity boaty miloko kanto antsoina hoe Karlbox
Ireto no takelaka fanoratana vaovao an'i Wacom: Bamboo Omni, Bamboo Solo ary Buo Duo
Bamboo Omni, Bamboo Solo ary Bambu Duo no fianakaviana pensilihazo vaovao an'i Wacom izay natolotra tao amin'ny foara IFA natao tao Berlin tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Ity ny Intuos 3D, takelaka Wacom vaovao
Wacom dia manaraka ny fizotran'ny famoronana sy pirinty 3D misy amin'ity takelaka vaovao antsoina hoe Intuos 3D ity izay hanampy ireo rehetra manomboka.
Wacom dia mandefa ny Bamboo Slate sy Folio miaraka amin'ny penina Omni
Wacom dia maniry ny tsipika manavaka ny dizitaly amin'ny pensilihazo sy taratasy nentim-paharazana mba hilentika miaraka amin'ny Bamboo Slate sy Folio.
Fitaovana tranonkala maimaimpoana 5 hamoronana infografika
Fitaovana tranonkala 5 azonao omena maimaimpoana hamoronana an'io infographic io izay mampiseho ny famintinana ny tetikasa na tantara iray.
Ao ambadiky ny logo «Jurassic Park»
Tom Martin dia talen'ny zavakanto malaza manana traikefa 30 taona mahery ao ambadiky ny famolavolana Jurassic Park sy horonantsary hafa.
Fanitarana Chrome 10 malaza ho an'ny mpamorona
Izahay indray dia mitondra fanitarana Chrome manokana manokana ho an'ny famoronana sy ny endrika ary ny karazany sy ny loko rehetra.
NASA dia mamorona andiana afisy fandraisana mpiasa any Mars
Ity andiana afisy NASA ity dia hamporisika anao hieritreritra ny mety hisian'ny andro iray ho tonga amin'ny planeta Mars ary hampivelatra ny asanao any.
Rings miaraka amina maritrano mahafinaritra amin'ireo tanàna manandanja indrindra eto an-tany
Ity mpanakanto ity dia manolotra firavaka tsara tarehy izay ahitanao ny firafitr'ireo toerana emblematika indrindra amin'ireo tanàna malaza eran-tany.
Fitaovana tranonkala manokana 5 vaovao ho an'ny mpamorona
Ny 2016 dia taona iray nahafahantsika nianatra momba ny fitaovana web vaovao sasany izay manome tanjona samihafa ary manokana ho an'ny mpamorona.
Imartgine.es, sehatra an-tserasera hampifandraisana ireo sary amin'ny mpanangona zavakanto
Androany dia te-hanolotra tetik'asa mahaliana iray izay vao fantatray izahay. Izy io dia loharanom-baovao vaovao ho an'ny mpanao sary, izay ...
Izahay dia mamela anao miaraka amin'ny fanangonana tanteraka tsy misy zavatra hafa ary tsy latsaky ny 80 lesona momba ny effets textes ho an'ny Photoshop maimaim-poana
Betsaka ny totozy azo ampiasaina amin'ny solosaina, saingy ireto telo ireto dia mety ho lasa zavatra irina hampifaly kokoa ny ora fiasanao.
Ireo 7 famaranana ho lasa logo vaovao Mozilla. Hetsika iray hahafantarana ny valiny avy amin'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa.
Splash dia rindranasa tranonkala iray ahafahanao mitady sary ao amin'ny magazay 500px amin'ny alàlan'ny fanaovana doodle tsotra.
4 fanitarana vaovao ho an'ny Chrome izay tsy tokony ho diso ny famoronana rehetra
Chrome dia manana fanitarana marobe mba ahazoana tombony betsaka amin'izany browser tsara izany. Ireto fanitarana 4 ireto dia tena manokana ho an'ny famoronana.
Ny fonosana feno fahendrena momba ny Fotoana maneho ny olan'ny hatavezin'i Amerika
Amerika dia manana olana amin'ny hatavezina ary ny magazine Time dia te-hampiseho azy amin'ity sary ity izay mampiseho azy amin'ny fomba tena feno faharanitan-tsaina.
Torohevitra 10 ho an'ny mpanao sary tsy miankina
Inona avy ireo zavatra tsy maintsy raisina mba hivoarana ao anatin'ny sehatry ny famolavolana sary? Tandremo ireto torohevitra folo ireto!
TOP 7 fandaharana tena ilaina amin'ny sary nomerika
Inona avy ireo programa ampirisihina hanao sary nomerika sy hahazoana valiny matihanina sy avo lenta? Mamaky hatrany!
+ 15 fanesoana amoron-dranomasina izay hahatonga ny volavolanao tsy ho tohaina
Mila fanesoana ve ianao hametrahana ny vokatrao amin'ity fahavaratra ity amin'ny fomba mahomby sy manintona? Mamaky hatrany ary aza adino ity compilation ity!
Inona avy ireo diplaoma ambaratonga matihanina ao anatin'ny famolavolana sary? Iza amin'izy ireo no anisany araka ny fahaizanao sy ny zavatra niainanao?
Boky famolavolana sary 3 tsara ho an'ny fahavaratra
Mitady boky famolavolana tsara ho an'ny fahavaratra ve ianao? Androany dia mizara lohateny telo tena mahaliana anao izahay! Mamaky hatrany!
Mampiasà Photoshop toy ny tena pro ao anatin'ny dingana 10
Amin'ity lesona ity dia hianaranao ny handray an-tsipiriany vitsivitsy izay tsy afa-mandositra ianao raha matihanina ary miara-miasa amin'ny Adobe Photoshop.
TOP 10 zavatra halan'ny mpamorona sary
Ianao ve hanakarama matihanina hamolavola sary famantarana na flyer? Jereo eto izay mankahala indrindra ny mpamorona sary.
Mamorona horonantsary mihetsika haingana miaraka amin'ny app Motion
Raha manana fitaovana Android ianao dia azonao atao ny misintona sy mampiasa ny Motion mba hamoronana horonantsary fijanonana amin'ny fomba tsotra sy mora.
Zavakanto farany: fanomanana alohan'ny handefasana hanao pirinty amin'ny toro-hevitra 5
Ny zava-kanto farany na ny famitana zavakanto dia manondro ny dingana iray mifantoka amin'ny fanomanana ny tetikasanay amin'ny fanontana.
Mitady fananana avo lenta sy matihanina ho an'ny Adobe Indesign? Aza adino ny safidinay modely maimaim-poana!
Zara niampanga ho naka tahaka ny volavolan-tanan'ny artista amerikana iray
Mpanakanto amerikanina iray, toy ny hafa, no mitsikera an'i Zara noho ny kopian'ny volavolany pin miaraka amina fampitahana izay anehoany azy.
Ny Bubble Books dia manitatra ny kaontenera ny tantara an-tsary nomerika amin'ny Google Play Books
Bubble Books no fiasa vaovao ao amin'ny Play Books izay manamora ny famakiana tantara an-tsary nomerika amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny haben'ny feon-teny.
Miverina ny tantara an-tsary: ​​nahazo ny volana tsara indrindra ny indostria tao anatin'ny roapolo taona tamin'ny Jona
Jona no volana varotra tsara indrindra ho an'ny indostrian'ny tantara an-tsary tao anatin'ny 20 taona; noho ny famoahana tantara an-tsary roa izay efa namidy be.